Gaarsiinta ubaxyada ubaxa ee Moscow
8 800 600-54-97 Ama wax u qor adeegga.floristum.ru/en
Ubax bixinta Moskow. Soo iibso ubaxyo naqshadeeye ubax ah
Bouquet of 19 dhalaalaya casaan "Aqua" oo leh cagaar qurxin ah oo ku jirta warqadda cufan ee Kraft
3100 ₽ Bouquet of-aadanka "Kasandra"
Ku dhufashada xilliga. Kubad ubax leh.
Pech Orchid Shrub wuxuu kacay Eucalyptus Eustoma Alstroemeria Anemones
Gawaarida hal-madaxa ah - 6 kumbuyuutar.
Hal madax leh ayaa kacay - 19 kumbiyuutar.
Bouquet dhalaalaya oo ka kooban laba nooc oo ubax iyo dianthus oo ku jira baakad casri ah.
4300 ₽ Nalalka
Rose - 10 kumbiyuutarada.
Eustoma (Lisianthus, Japanese rose) - 11 kumbuyuutar.
waxaan dammaanad ka qaadeynaa ubaxnimada cusub .. gaarsiinta laga bilaabo laba saacadood ... bouquet-ka ayaa ku kicin kara mala-awaalka haweennimo. ubax casaan qurux badan iyo eustoma xarrago leh ayaa si yaab leh ugu wada nool qaab ubax ah.
6126 ₽ Bouquet jacayl ah.
oh, sida taabashada iyo jacaylka bouquet this u muuqataa! waxaa loo sameeyay mudane jilicsan iyo taariikhdiisa ku habboon.
6681 ₽ "Jacayl jacayl
Bouquet oo midabbo dhalaalaya leh oo ah 9 Ubax-biyoodka, 5 alstroemeria cad, 7 buluug oo buluug ah, 6 jaalle adag, 1/2 baako oo ah cagaarka salal ee warqadda farshaxanka ah.
4700 ₽ Bouquet of ubax "Florida"
Wadnaha isku-xidhka ah ee ubaxyada kareemka 51 ee noocyada "Taleya".
9250 ₽ Wadnaha qaabdhiska soobaxyada (51 ubax)
minigerbera 5, lisianthus 3, alstroemeria 3, baadiyaha kacay 3, pistachio, salal, mesh
4050 ₽ Bouquet of ubax
kacay aqua 9, orchid 8, alstroemeria 3, ozatamnus 3, salal 1 xirmo, warqad kraft ah.
5860 ₽ Bouquet of ubax "Dareen sare"
5450 ₽ Bouquet-heart of-aadanka (41 ubax)
Bouquet of chamomile yar 25 kumbiyuutarada, tulips huruud ah 16, xarkaha
6650 ₽ Bouquet of ubaxyo iyo tulips huruud ah "dhalaalaya"
<% wax soo saar. qorid%>
<% wax soo saar. baaxad%> cm
<% wax soo saar. dherer%> cm
<% wax soo saar.clientPrice%> ₽ <% wax soo saarka.name%>
ubax bixinta <% product.deliveryTime? Waqtiga: 'laga bilaabo 2h.' %>
Waan ka xumahay, ma jiraan wax dalab ah oo laga helayo magaalada Moscow iyadoo loo eegayo xuduudaha aad sheegtay,
isku day inaad beddesho xuduudahaaga raadinta.
Magaalada Moscow, waxaa suurtagal ah in la dalbado bixinta noocyada soo socda ee ubaxyada:
<% waxyaabaha. wax soo saarType.alt_name%>
Qurxinta caadiga ah
Bouquet ka mid ah 19 soobaxyada guduudan, 15 ruscus, hadiyad la duubay.
3060 ₽ Bouquet of-aadanku cas (19 ubax)
Bouquet ku jira codad casaan ah 15 minigerberas leh cagaar, bastoolado iyo baakadaha: farsamada iyo aamusnaanta.
3050 ₽ Bouquet of ubax "Red Gerberki"
Bush chrysanthemum - 15 kumbiyuutar.
bouquet of 15 chrysanthemums buufin
4900 ₽ bouquet of 15 chrysanthemums buufin
Bush chrysanthemum - 51 kumbiyuutar.
Bouquet qurux badan oo ka mid ah 51 chrysanthemums
Alstroemeria - 19 kumbiyuutar.
Xirxirida - 1 pc.
Bouquet bouquet of alstroemeria white in farsamada.
Rose - 25 kumbiyuutarada.
Bouquet qurux badan oo ubaxyo huruud dhalaalaya sanduuqa hat a. Bouquet-kan cajiibka ahi wuxuu noqon doonaa hadiyad cajiib ah munaasabad kasta ama dhacdo kasta. Bouquet-ka ayaa hubaal siin doona dareenka ugu fiican ee kuwa aad jeceshahay.
Bush wuu kacay - 15 pc.
Hal madax leh ayaa kacay - 9 kumbiyuutar.
Ubaxyo buufin soo jiidasho leh oo lagu daray buufin casaan casaan casri ah.
Iris - 25 kumbiyuutarada.
waxaan damaanad qaadeynaa ubaxnimada ubaxnimada. gaarsiinta laga bilaabo laba saacadood ... bouquet of buluug irises hadiyad ahaan waa calaamad diiran, jilicsan oo la safeeyey ee jacaylka iyo qadarinta, taas oo sababi doonta oo keliya shucuur wanaagsan oo aan u muuqan doonin wax iska yeelyeel ah. iriska, muujinta daahirnimada, weynaanta iyo uumbeynta guga, maahan wax aan micno lahayn oo ay jecel yihiin dad badan oo qurux badan!
ilaa 1 saac
Peony - 11 kumbiyuutarada.
bouquet of peonies cirro cirro leh, shaki kuma jiro, gabadh kasta way ku farxi doontaa inay hesho, sababtoo ah ubaxyadan macnaheedu waa jacayl iyo diirimaad uu bixiyaha u dareemayo cinwaanka hadiyadiisa Baakadaha waraaqaha asalka ah ee lagu xiray xargaha satin ee midabka casaanka ah ayaa dhameystiri doona bouquet-ka, taasoo ka dhigeysa xitaa mid qurux badan oo asal ah!
4594 ₽ Bouquet of 21-aadanku huruud ah
Ubaxyada geedka 'shrub' waxaa iska leh miskaha miskaha ubaxyada, oo ka soo muuqday Dunida qiyaastii 40 milyan oo sano ka hor. Maanta, hiddo-wadahan ayaa mideeya qiyaastii 250 nooc oo dhir kala duwan ah iyo in ka badan 200 kun oo nooc. Markii ugu horreysay, ubax waxaa loo yaqaan eraygii reer Faaris ee hore "wrodon", ka dibna Giriigga waxaa loogu yeeri jiray "rhodon". Mar dambe ayaa eraygan ay Rooma u beddeleen "rosa". Gobollada dhexdhexaadka ah iyo kuwa diiran ee Waqooyiga Hemisphere, ubax waxaa laga heli karaa duurka, iyagu kama liidan quruxda iyo udgoonka wanaagsan ee foomamka beerta. Maanta, kuwa bannaanka u baxa waxay koraan noocyo kala duwan iyo isugeyn geedkaan, kuwaas oo lagu kala saaro quruxda cajiibka leh ee ubaxa. Waxay si gaar ah caan ugu yihiin maahan oo kaliya beeralayda ubaxa, kuwa bannaanka u baxa iyo naqshadeeyayaasha muuqaalka dhulka, laakiin sidoo kale waxay ka mid yihiin dhammaan kuwa jecel quruxda.
4512 ₽ Bouquet of 31-aadanku buufin isku qas
5806 ₽ Bouquet of 11-aadanku buufiyo peony
Muuji dhammaan bouquets-yada caadiga ah
Ubax sanduuqyada ku jira
gabbaldayaha 7, buplerum 2, pinkum isha 4, yar yar chamomile 3, nigella buluug 5, ammonium 2, limonium yellow 3, salal 2/3, Eucalyptus 1/2, box-parcel, furitaanka baqshadda.
8710 ₽ Ka kooban qorraxda "xirmo qorraxeed"
Sanduuqa wadnaha 1 pc, baadiyaha wuxuu kacay 7 kumbiyuutar, xarfaha shukulaatada 5 kumbiyuutar
3350 ₽ Sanduuq leh ubax "Love Heart"
Peony 1 kumbiyuutarrada Eustoma 2 kumbiyuutarada Kali madax ah ayaa kacay 3 kumbuyuutar Spray kacay 3 kumbiyuutar Alstroemeria 3 kumbiyuutarada Kaliya madax-weyne 1 carbuun Eucalyptus
3900 ₽ Subax Marshmallow
Eustoma (Lisianthus, Japanese rose) - 1 kumbuyuutar.
Peony wuu kacay - 1 pc.
Hal madax leh ayaa kacay - 3 kumbiyuutar.
Halabuurka Mimic, oo ku habboon labada amiirad yar iyo kuwa waaweynba)))
Orchid Eustoma Alice Rose oo hal madax leh Alstroemeria Eucalyptus
Bush wuu kacay - 21 pc.
Waxaan dammaanad ka qaadeynaa ubaxyada cusub .. gaarsiinta laga bilaabo laba saacadood ... ubaxyo casaan casaan qafiif ah oo ku dhexjira sanduuq casri ah iyo mid cad, oo lagu qurxiyay qaanso satin jilicsan, waxaad u egtahay mid la safeeyey, oo casri ah oo xarrago leh. u samee bogaadin asal ah oo wax ku ool ah qofka aad jeceshahay ee aad jeceshahay!
4559 ₽ "Mucjiso Satin"
Ha qarin dareenkaaga, nooga sheeg iyaga iyaga oo leh boodh ka mid ah ubax casaan ah! Bouquet-ka quruxda iyo jilicsanaanta aan caadiga ahayn ayaa dhaqan ahaan astaan ​​u ah dhalinyarada, quruxda, soo bixitaanka dareenka cusub. Ubaxyada casaanku sidoo kale waa muujinta damqashada iyo tilmaam dahsoon oo ah xiisaha aan shaki ku jirin ee gabadha. Sanduuqa koofiyadaha wareega ee bouquet-ka lagu dhejiyay waxay siineysaa muuqaal casri ah, muuqaal iyo casriyeysan. Hadiyaddan oo kale runtii waa la qadarin doonaa!
17680 ₽ Riyooyin casaan ah
Tulip - 49 kumbiyuutar.
Bouquet ka kooban 49 tulips huruud ah oo qoraxdu ku jirto sanduuqa koofiyaddu waa gu'ga iyo hadiyadda ugu jilicsan ee aad ka fikiri karto. Biqillada waaweyn ee tulips-ka boqortooyadu waxay la yaaban yihiin hufnaanta hooska iyo ku-beddelka jilicsan ee codadka ee caleemaha, dhammaantoodna waxay abuurayaan hal hees oo diirimaad, jacayl iyo jilicsanaan leh.
5848 ₽ Subax qorax leh.
Sanduuqa hadiyadaha ee ubaxyada lagu buufiyo 3 kumbiyuutar, laamaha spruce, qorfe 2 kumbiyuutar, qurxinta Sannadka Cusub, iyo sidoo kale kareem malab 3 kumbiyuutar.
5750 ₽ Halabuurka Sannadka Cusub "Cretaceous"
Sanduuq ka mid ah ubaxyada buufin ee codka jilicsan, iyo sidoo kale berry: strawberries, raspberries, blackberries, iyo sidoo kale truffles Faransiis.
8850 ₽ Sanduuq leh ubax, miro iyo macmacaan "Qaaciddada jacaylka"
Orchid 3, baadiyaha kacay 4, ferrero 7, eucalyptus, pistach, salal, hatbox
3950 ₽ Sanduuq leh ubaxyo iyo macmacaan "Janie"
Qabanqaabinta sanduuqa koofiyadaha oo ah 5 aqua rosos, 5 cymbidium orchids cagaaran, 7 ubaxyo diirran oo kulul, 5 hyacinths pink, 9 freesias cad, 3 lisianthus cad, 1/2 baakidh eucalyptus.
9450 ₽ Qabanqaabinta sanduuqa koofiyadaha "Quruxda Fiican"
Dhammaan ubaxyada ku muuji sanduuqyada
Dambiilo ka kooban 25 midab oo midabbo badan leh oo Kenya ah oo leh cagaar qurxin ku jirta dambiisha hadiyadda.
4750 ₽ Dambiil ubax (25 soobax)
Dambiil ka kooban 25 nooc oo midabbo badan leh oo leh cagaar qurxin ku jirta dambiisha.
7300 ₽ Dambiilood oo ubax ah "dambiil midabyo badan leh oo dambiil ku jira"
Dambiil ka kooban 15 midabbo badan oo midabbo leh oo leh cagaar qurxin leh.
5000 ₽ Dambiil alstroemeria midab leh (19 kumbiyuutar)
iris 7, lisianthus 3, baadiyaha kacay 2, tulip 10, statice 1, cagaar, dambiil
6800 ₽ Dambiisha ubaxyada guga "Guga dhalaalaya"
Dambiil midabbo dhalaalaya oo ka mid ah ubaxyada 19 kumbiyuutarada, alstroemeria 10 kumbiyuutar, germini 18 kumbiyuutar, ubax buufin 5 kumbiyuutar, irises 13 kumbiyuutar, solidagi 10 kumbiyuutar oo leh cagaar qurxin ku jirta dambiisha hadiyadda.
14850 ₽ Dambiil ubax leh "Dooxada Qorraxda"
Dambiil ka kooban 25 tulips midabbo badan leh oo leh cagaar qurxin leh.
4850 ₽ Dambiilo tulips midabbo badan leh "Guga Kaleidoscope"
Dambiil oo ka kooban 18 tulips midabbo badan leh iyo 17 iris oo buluug ah oo leh cagaar qurxin leh.
5650 ₽ Dambiil leh tulips iyo irises "Nus saac ka hor guga"
Dambiilood oo ku jira midabbada casaanka ah ee loo yaqaan '5 aqua roses', 4 soo buufis ah, salal, pistachio.
3050 ₽ Dambiil ubax leh "Amaan yar"
Dambiil casaan, oranjo, minigerberas jaalle ah 11 kumbiyuutar, 3 dais, 3 alstroemeria cad, 15 ruscus, xargaha qurxinta 3 kumbiyuutar.
4650 ₽ Dambiisha ubaxa "Xagaagan"
Orchid 13 kumbiyuutarada Kali-madaxa ayaa kacay 7 kumbiyuutarro Eucalyptus Lilac 3 kumbiyuutarada Dambiisha Satin
10700 ₽ Dareenka
31555 ₽ Jannada casaan
Dambiilood 51 ubaxyo buufin jaalle ah oo leh cagaar qurxin ku jirta dambiil.
13550 ₽ Dambiil ubax "Sun" (51 ubax)
Tus dhammaan dambiilo ubax ah
Dambiilo midho ah iyo halabuur
Isku-darka sanduuqa-wadnaha ee strawberries cusub 700 GR iyo baraf cad-cad oo loo yaqaan 'gypsophila 3 pcs.
4950 ₽ Isku-darka sanduuq leh ubaxyo iyo miro "Strawberry shine"
Dambiil leh berry: strawberries 500 GR, blackberries 125 gr., Raspberries 125 gr, blueberries 125 gr, currants 125 gr, macaron 14 pcs.
8150 ₽ Dambiil "Berry leh makaroono"
Strawberries (Strawberries) - 32 kumbiyuutar.
Hadiyad aan caadi ahayn oo ka timid Strawberries ayaa ku habboon saaxiibbadaada. Hooyo iyo ayeeyo waxay jeclaan doonaan bouquet of berry delicious, oo calaamad u ah dib u heshiisiinta maqnaanshaha dheer awgeed !!!
4620 ₽ Strawberries leh ubax.
Santuuqa wadnaha u eg ee ka samaysan berry: strawberries 500 GR., Raspberries 125 gr., Blackberries 125 gr., Blueberries 125 gr., Currants 125 gr.
7450 ₽ Sanduuqa wadnaha "Berry mix"
Dambiisha midhaha: qaraha Thai 1, boqortooyada pomelo 1, pitahaya cad 1, jaalle pitahaya 2, kaffir lime 1, is biirsaday qumbaha yar yar 1, 4 noocyo cambe oo kala duwan, carambola 4, mini cananaaska 1, guava 1, longan 1, midho dareen 3 , kiwi premium gold 3, mangosteen 4, papaya 1, rambutan 10, grandilla 3, coconut joogto 1, physalis xirmo 1, - iyo waliba qalaad Vanda 3 orchids, cymbidium orchid 4, dendrobium orchid 13.
39750 ₽ Dambiilood oo midho qalalan iyo orchids "Paradise Phuket"
Strawberry 1250 gr., Blueberry 500 gr., Blackberry 500 gr., Currant 250 gr., Raspberry 375 gr., Peony 6 pcs., Chamomile 9 pcs., Pistachio, ribbons, dambiil.
19750 ₽ Dambiil leh berry iyo ubax "Qalbigayga oo dhan!"
avocado 7, kiwi 2, rose 7, chrysanthemum 3, lagurus 1 farabadan, yaanyo cherry 15, eucalyptus 1 pack, pistachio 3, box 1
8250 ₽ Halabuurka "Avokado"
Dambiisha ubaxyada qalaad: cymbidium orchid cad 5 kumbiyuutar, leucospermum 3 pcs, craspedia 6 pcs, ambrella 1 pc, aspidistra 3 pcs, salal 1/2 pack, mango 3 pcs.
7750 ₽ Dambiilood oo ubaxyo iyo miro ah "Mango casiir leh"
Sanduuqa wadnaha 20 * 10 - 1 pc. Strawberries cusub - 500 gr. Qaansada - 1 pc.
2950 ₽ Halabuurka hadiyadaha "Wadnaha Strawberry"
Strawberries cusub 1 kg. - 1 PC. Warqadda tish - 1 pc. Dambiil - 1 pc.
5750 ₽ Dambiisha Strawberry
Bouquet of strawberries waa hadiyad aan caadi ahayn, xad-dhaaf ah oo xusuus mudan. Ma aha oo kaliya qurux, laakiin caafimaad iyo dhadhan fiican.
5598 ₽ Buugga Strawberry
Muuji dhammaan dambiilaha miraha iyo halabuurka
Macmacaanka iyo macmacaanka
Dambiilood oo ku jira midabada buluug-buluugga ah ee ubaxyada, freesias guduudka ah, lisianthus, alstroemeria cad, iyo sidoo kale shaaha qasacadaysan, buskudka ayaa karaya, shukulaatada Lindt, ee dambiisha ku jirta.
9350 ₽ Dambiil ubaxyo leh, shaah iyo macmacaan "Matre"
Bouquet of miraha la qalajiyey.
Bouquet ragga qurux badan.
Shukulaatada daboolan strawberries
Iskuxidhka miraha la qalajiyey!
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: cananaaska, lowska, miraha la qalajiyey, looska, cambe
Ragga labka ah
4250 ₽ Bouquet №71
5750 ₽ Bouquet №72
Marshmallow - bouquet bakeeriga strawberry
Dambiil macaan oo miraha la qalajiyey
4950 ₽ Bouquet №101
Tus dhammaan macmacaanka iyo keega
Gaarsiinta ubaxyada ubaxyada ee Moskov la Floristum.ru
Floristum waa adeeg lagu dalbanayo ubax bixinta magaalada Moscow iyo guud ahaan Ruushka.
On Floristum.ru waxaad ka dalban kartaa bouquets adigoo u keenaya xafiiskaaga ama gurigaaga ku yaal Moscow adoo ka helaya shabakad federaal ah oo dukaamo ubax leh oo leh saamiga ugu fiican ee qiimaha. Xusuusnow in raqiisku uusan had iyo jeer ku fiicnayn quruxda iyo ugubnaanta. Laakiin qiimaheena, ubaxyada ubaxyada ah ee laguu soo gudbin doono, ayaa kaa farxin doona. Isbarbar dhig dalabyada isku mid ah ee ubaxleyaasha iyo dukaamada lagu soo bandhigo Floristum ee magaalada Moscow ama magaalo kale oo aad dooratay.
Adiga oo dalbanaya bouquet ah oo lagu geeyo magaalada Moscow gurigaaga ama xafiiskaaga - adiga, ama qofka aad rabto inaad ka yaabiso, waxaa laguu ballan qaadayaa inaad hesho ubax cusub oo xirfad leh oo lagu qurxiyo cinwaanka ku xusan iyo muddada muddada cayiman.
Warqaddu waxay wareejineysaa ubax qosol, hambalyo cod ah, haddii aad rabto, magaca cidda soo dirtay, sidoo kale waxay sawir ka qaadaysaa xilliga la keenayo, iyadoo la oggolaanayo qofka qaataha, dabcan. Adeeg bixinta ubax waxaa laga heli karaa saacad kasta iyo magaalo kasta oo dalka ka mid ah!
Maamulayaasha agaasimayaasha dukaankeenna ubaxa iyo ubaxleyaasha khibradda leh ayaa ku daneynaya adiga, iibsade ahaan iyo cinwaankaaga, adoo ku qanacsan, ka tagaya jawaab celin wanaagsan oo qaddarinaya shaqada laga qabtay bogagga shabakadda nidaamka. Qiimeynta macaamiisha ayaa saameyn ku leh darajada dukaamada iyo ubaxleyda shaqsiyeed, taas oo go'aamisa inta jeer ee laga dalbanayo ubaxyada ubaxleyda.
Amarka kasta ee ubaxyada ee Moscow waxaa ilaaliya nidaamka tayada Floristum oo leh dammaanad ah soo celinta deg-degga ah ee lacagta la siiyay iibsadaha haddii ay dhacdo xoog ku qasab. Waxaan si dhow ula soconaa shaqada bakhaarada, marka haddii khilaaf yimaado, kaliya u qor adeeggayaga cinwaanka ku xusan goobta.
Markaad ku bixinayso websaydhka adoo isticmaalaya kaarka bangiga, lacagaha aan laga soo saarin koontadaada, laakiin waxaa lagu xayiray warqadda dheelitirka, tani waxay noo oggolaaneysaa inaan si dhakhso leh u damaanad qaadno inaan soo celinno dhammaan ama qayb ka mid ah qaddarka amarka iyada oo aan la helin guddiyo iyo khasaaro ku meel gaar ah haddii ay dhacdo xaalado lama filaan ah marka la fulinayo waajibaadkayaga xitaa Febraayo 14 iyo 8 Maarta. Waxaad ku soo gudbin kartaa dalab 3 maalmood gudahood.
Waxaan sidoo kale la shaqeynaa hay'adaha sharciga ah wareejinta bangiga
Bouquets with pay by bank transfer to ህጋዊ hay'adaha, shaqaalaha ururada, macaamiishooda la geeyo xafiisyada iyo guriga waa mid ka mid ah jihooyinka ugu muhiimsan ee shaqadeena. Waxaad ka dalban kartaa bouquet-ka qoraaga keenista magaalada Moscow hadda, oo waxaad ka bixin kartaa koontada bangiga ee hay'ad sharci ah!
Waxaan bixinaa xirmo buuxa oo ah dukumiintiyada xiraya alaabada nalaga soo iibsaday. Faahfaahin ka akhriso qaybta gaarsiinta bouquets of ubax by bangiga wareejinta magaalada Moscow